Nepse Online बाबु घरबाहिर नजानु ल! – nepseonline
Wednesday 05-25, 2022, 10:05 am
आमा र बाबा रुपी दुवैले बडो जतनका साथ त्यो बच्चोलाई उड्न सिकाइरहेका थिए। गुँडमा कतिवटा बच्चा थिए, मैले देखिन। तर, त्यसअघि एउटा बच्चा मेरो आँखा अघि नै खसेर मरेको थियो। यो बच्चा उड्न थालेकोमा म खुशी थिएँ। भक्तपुर दोस्रोपटक पानीले जलमग्न थियो। म लुगा सुकाउन छतमा गएकी थिएँ। यो के! छतमा लछप्प पानीले भिजेको एउटा रुपीको बच्चो कोल्टे परेर तन्किएको थियो। थाहा छैन त्यो रुपीको बच्चो कसरी छतमा पुग्यो कसरी मर्यो! छतमा लुगा सुकाउन गएकी म पानीले रुझुन्जेल छतमै बसेँ। नजाने आमा र बाबा रुपी कहाँ के गर्दै थिए….
अनि त्यसकै भोलिपल्ट भक्तपुरमै कहालीलाग्दो गरी माटोमा गाडिएको अवस्थामा ११ वर्षका बच्चाको शब भेटियो। तस्वीरमा अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएको बच्चा हिलोमा घोप्टो परेको थियो। समाचारले भन्यो – काठमाडौंको काँडाघारीबाट अपहरण परेका ११ वर्षका निशान खड्काको शव थिमिमा फेला परेको छ।